Tsy Natahotra i Davida Niady Tamin’i Goliata | Ampianaro ny Zanakao
Ny Tilikambo Fiambenana | Desambra 2008
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Nahoana i Davida no Tsy Natahotra?
MBA matahotra ve ianao indraindray?... * Mety hahazo ny olon-drehetra izany. Inona no azonao atao rehefa matahotra?... Miresaha, ohatra, amin’ny olon-dehibe sy matanjaka kokoa noho ianao. Ohatra hoe i Dada na Neny. Afaka manao toa an’i Davida koa ianao. Nitady fanampiana tamin’Andriamanitra izy. Hoy izy: ‘Mitoky aminao aho. Andriamanitra no itokisako, ka tsy hatahotra aho.’—Salamo 56:3, 4.
Iza no nampianatra an’i Davida mba tsy hatahotra? Ny dada sy mamany ve?... Ie. I Jese no dadany. Nanam-pinoana izy ary razamben’i Jesosy Kristy, ilay “Andrianan’ny Fiadanana” nampanantenain’Andriamanitra. (Isaia 9:6; 11:1-3, 10) I Obeda no dadan’i Jese, izany hoe dadaben’i Davida. Ary fantatrao ve ny maman’i Obeda?... Rota. Tsy nivadika tamin’Andriamanitra izy, ary misy boky ao amin’ny Baiboly aza mitondra ny anarany. I Boaza no vadiny.—Rota 4:21, 22.
Efa maty efa ela i Rota sy Boaza, vao teraka i Davida. Fantatrao angamba ny maman’i Boaza, izany hoe ny beben’ny dadaben’i Davida. Nipetraka tao Jeriko izy, ary nanampy mpitsikilo israelita roa. Tsy maty izy sy ny fianakaviany rehefa noravana ny mandan’i Jeriko. Nisy tady mena midorehitra mantsy nafatony teo am-baravarankeliny. Fantatrao ve ny anarany?... Rahaba. Lasa mpanompon’i Jehovah izy, ary tokony ho be herim-po toa azy ny Kristianina.—Josoa 2:1-21; 6:22-25; Hebreo 11:30, 31.
Tsy maintsy hoe nolazain’ny dada sy maman’i Davida taminy, ny tantaran’ireny mpanompon’i Jehovah tsy nivadika ireny. Nasaina nampianatra an’izany mantsy ny ray aman-dreny. (Deoteronomia 6:4-9) Tatỳ aoriana dia nirahin’Andriamanitra i Samoela mpaminany mba hifidy an’i Davida, zanak’i Jese faralahy, ho mpanjakan’ny Israely.—1 Samoela 16:4-13.
Indray andro dia nirahin’i Jese i Davida mba hanatitra sakafo ho an’ny zokiny telo lahy, izay niady tamin’ny Filistinina fahavalon’Andriamanitra. Rehefa tonga tany i Davida, dia nihazakazaka nankeny an’ady. Hitany àry i Goliata, miaramila ngezabe, izay nanesoeso ny “tafik’ilay Andriamanitra velona.” Natahotra ny hiady taminy daholo ny olona, afa-tsy i Davida. Henon’i Saoly Mpanjaka izany, ka nampanantsoiny izy. Hoy anefa i Saoly rehefa nahita azy: “Mbola zaza ianao.”
Nohazavain’i Davida anefa fa efa namono liona sy orsa saika hihinana ny ondrin’izy ireo izy. Hataony hoatran’ireny koa i Goliata, hoy izy. “Mandehana àry”, hoy i Saoly, “ary homba anao anie i Jehovah!” Nifidy vato dimy malama tsara i Davida, ka nataony tao anaty kitapo fitondrany miandry ondry. Nitondra pilotra koa izy, ary lasa hiady amin’ilay olona ngezabe. Hitan’i Goliata fa mbola zaza i Davida, ka nivazavaza izy hoe: ‘Avia ialahy etỳ, fa homeko ny vorona ny fatin’ialahy.’ Namaly mafy koa i Davida hoe: ‘Izaho manatona anao amin’ny anaran’i Jehovah. Hovonoiko ianao’ androany.
Nihazakazaka nanatona an’i Goliata i Davida, sady naka vato tao anaty kitapony. Nalefany tamin’ny pilotra ilay izy, ka voa ny handrin’i Goliata. Natahotra be àry ny Filistinina satria maty ilay miaramila ngezabe, ka nitsoaka izy rehetra. Nenjehin’ny Israelita izy ireo ary resiny. Ao amin’ny 1 Samoela 17:12-54 io tantara io. Vakio miaraka amin’ny fianakavianao ange ilay izy e!
Matahotra ny hanaraka ny didin’Andriamanitra indraindray, ny ankizy hoatra anao. Natahotra, ohatra, i Jeremia tamin’izy mbola tanora. Hoy anefa Andriamanitra: ‘Aza matahotra fa momba anao aho.’ Niezaka ny tsy hatahotra àry izy ka nitory, satria izany no nasain’Andriamanitra nataony. Raha matoky an’i Jehovah toa an’i Davida sy Jeremia ianao, dia mba tsy hatahotra koa.—Jeremia 1:6-8.
Inona no nataon’i Davida rehefa naneso ny tafik’Andriamanitra i Goliata?
Ahoana no nandresen’i Davida an’i Goliata?
Inona no hanampy antsika tsy hatahotra?
Hizara Hizara Nahoana i Davida no Tsy Natahotra?
Nahoana i Davida no Tsy Natahotra An’i Goliata?
w08 1/12 p. 16-17
Tenin’olona Momba An’i Jesosy
Modely Tonga Lafatra i Jesosy
Nahoana no Tena Zava-dehibe ny Fahadiovana?
Nahazo ny Tena Fahafahana ny Maya
AMPIANARO NY ZANAKAO Nahoana i Davida no Tsy Natahotra?
Ny Kristianina Voalohany sy ny Tontolo Grika
Avy Amin’Andriamanitra ve ny Fanasitranana Mahagaga?
Tsy Nanao Karate Intsony Izy
Nitady ny Diso Kanjo Nahita ny Marina
Mino ny Testamenta Taloha ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
Mpamorona Mendrika ny Hoderaintsika
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2008
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2008
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Desambra 2008